Warar aan la hubin ayaa sheegaya in Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyada Sacuudiga… – Hagaag.com
Warar aan la hubin ayaa sheegaya in Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyada Sacuudiga…
Posted on 7 Oktoobar 2018 by Admin in World // 0 Comments
War cusub oo kasoo baxay dowladda Turkiga ayaa waxaa uu sheegayaa in wariyihii Sacuudiyaanka ahaa ee lagu la’aa magaalada Istanbul Jamal Khashoggi lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga xilli uu halkaasi ka doontay warqado la xiriira arrimo guur.
Wariyahan oo ahaa mid dhaleeceeyay dowladda Sacuudiga ayay dowladda Turkiga sheegtay in ay u badinayaan in ay dileen koox laga soo diray dalka Sacuudiga kuwaas oo qunsuliyadda ku dhex dilay islamarkaana meydkiisa ku qaaday baabuur madow.
Warkan ayaa imaanaya xilli ay dowladda Sacuudiga u ogolaatay hay`adaha ammaanka Turkiga in ay kasoo baaraan gudaha qunsuliyadda oo markii dad ugu wardambeysay uu wariyuhu galay.
Caddeymo la xiriira dilka ayay sheegeen in ay dowladda Turkigu hayso oo isugu jira video iyo dhaq-dhaqaaq kale oo wariyuhu sameeyey markii nolol ugu wardambeysay.
Wariyahan oo lagu magacaabo Jamal Khashoggi ayaa la sheegay in uu yahay mid aad u dhaleeceeya dowladda Sacuudiga, waxaana isagoo la socotay haweeney uu guursan lahaa uu waraaqado cadeymo guur ka doontay qunsuliyada Sacuudiga ee magaalada Istanbuul halkaas oo uusan kasoo bixin marki uu galay.
Haweeneydii la socotay oo bannaanka lagu reebay ayaa sheegtay in ay saacado badan bannaanka ku sugaysay wariye Jamal Khashoggi balse uu soo bixi waayay, waxaana ay sheegtay in laga dhigay taleefankii uu watay.
Dhanka dowladda Sacuudiga ayaa waxaa ay iyana sheegeysaa in wariye Jamal Khashoggi uu ka baxay qunsuliyada markii loo “dhammeeyay” adeegiisa. Laakin kaamarooyinka ku xiran safaarada ayaa lagu arkay gelida oo keliya.
Arrintani haday run noqoto waxaa ka dhalan kara mad madow soo dhex gala xiriirka Sacuudiga iyo Turkiga, asaga oo markiisii horeba aanu fiicneyn kadib markii Turkiga la safatay dalka Qatar xiisada khaliijka.